Semalt: Ahoana ny Ataon'ny Mpanao Heloka Bevava Aterineto Aminao Amin'ny Internet?
Nanokatra fomba malalaka ho an'ny rehetra ny aterineto. Tsotra izany. izanymety. Tena mahatalanjona izany. Azonao atao ny mividy, mandoa faktiora, mijery sarimihetsika, mahazo vaovao, mamandrika, miasa amin'ny go plus plus. Amin'ny ankapobenyNy mponina dia mampiseho fomba vaovao hampiasana ny aterineto, ireo mpanao heloka bevava aterineto dia miondrika, fa tsy manorina azy, mitady ny hanafay, manodina ary hangalatra - joomla modulos gratis. Noho izany,ahoana no ahafahanao mialokaloka amin'ireo mpisoloky amin'ny aterineto?
Eny ary, ny valiny dia tsotra: mifankazà amin'ny pejin-dresaka mahazatra an-tserasera, nofaritan'i Max Bell,ny Sampan-draharaha Mpanantanteraka Successor an'ny Semalt ,ary tsy ho lasibatra ianao.
Famandrihana an-tsokosoko Phishing
Tamin'ity taona ity (2017), ny isan'ny mailaka phishing nalefa dia 155% mihoatra noho ny teotaona lasa. Ny famandrihana phishing dia mifototra amin'ny fifandraisana eo amin'ny tambajotra sosialy na amin'ny alàlan'ny mailaka. Eto, ilay mpitsikilo dia manandranaMandresy lahatra anao amin'ny famoahana ny nomeraon-telefaoninao, banky, antsipirihany, na ireo angona manokana hafa. Azonao atao ny mampirisika anao hikendryrohy. Ity dia fomba fampielezana ny malware amin'ny data amin'ny rafitrao. Miaraka amin'ny programa antivirus iray tsara sy vaovao, tokony ho afakaAtsaharo ity trangan-javatra ity.
Io famandrihana io dia miteraka alalana mailaka am-po, hafatra, taratasy naNa dia hafatra avy amin'ny haino aman-jery sosialy nalefan'ny vehivavy iray ao anatin'ny fahantrana aza. Nolazain'izy ireo fa mpanan-karena manan-karena izy, orinasam-panjakana na governemanta governemantamangataka aminao mba hanampy azy hamerina ny vola aorian'izay dia hahazo vola be ianao. Ireto ny traikefa: manampy anao handoa saram-pandraharahana ianao rehefa avy miverinaShareAlike;
Ao anatin'ity tetikasa ity dia mahazo karatra fiarahabana avy amin'ny namana ianao. Na izany aza, arohy izay raha asiana kliketrana dia misy malware dia ampidirina any amin'ny karatra fiarahabana. Ny malware dia mety ho zavatra avy amin'ny fandaharam-potoan-dratsyizay manomboka dokam-barotra pop-up na varavarankely tsy ampoizina amin'ny tranokala web. Amin'ny tranga ratsy indrindra, mety ho ransomware - ny nofy ratsy rehetra.
karatry ny karatra
Rehefa miezaka mafy ny fotoana, dia miala amin'ny tetika isan-karazany ny olona mba hahazoany fanampiana ara-bola.Na izany aza dia mety hahazo tolotra izay tsara loatra ianao raha te ho marina. Raiso ity ohatra ity: mipetraka eo an-damosin'ny fiara ianao eo am-pandehanana mankany aminaoMitadiava hafatra izay efa nahazo alàlana efa nekenao ianao ary tsy dia liana loatra..Aza lavina amin'ity tranga ity. Ampiasao ny fahatsapana.
Mety ho ilay tranga tranainy indrindra amin'ny aterineto. Tonga avy amin'ny mailaka izany. Tsotra ny hafatra:Nahazo ny loka vola ianao tamin'ny loteria na ny fialam-boly fanasoavana, fa ho anao kosa hitaky ny volanao, dia tsy maintsy mandoa vola na zavatra hafa ianaoao amin'io andalana io. Ho gaga ianao amin'ny isan'ireo mpandresy nandresy nefa tsy nandray anjara mihitsy.
Izany dia fanosehana mivantana. Ny mpanafika dia mampatahotra ny hamono anao raha tsy mandoa vola ianao.Nolazain'izy ireo fa nokaramaina izy ireo hamono anao amin'ny toerana voalohany, saingy izy ireo (ireo mpihetsiketsika) dia nieritreritra fa tokony handoa azy ireo ianaoamin'ny fiadanana. Ny mampahatahotra dia ny fahafahan'izy ireo mitantara ny fiainanao.
Mandrindra tranonkala mampiaraka izy io. Azo atao mandritra ny volana maromaro ny sori-dalanafitaka. Ny mpiara-miombona mpiara-miombon'antoka iray dia afaka miadana ny fahatokisanao amin'ny fanomezanao fanomezana. Indray andro, milaza izy ireo fa misy trangam-piaramanidina. Matetika ny havany iraydia ho marary na ny orinasam-pandraharahana dia voatsara noho ny tsy fisian'ny vola. Avy eo ianao dia angatahana handefa vola izay haverina.
Eto dia ahitanao vaovao fa efa nahazo asa goavana ianao miaraka amin'ny karaman'ny karama. Eryis catch though. Mba hiantohana ny asa, dia tsy maintsy mandoa saran-dàlana ianao.
Miseho mandritra ny fety tahaka ny amin'ny fahavaratra na amin'ny Krismasy. Eto dia ampanantenainao tsarapandehanana mandeha amin'ny vidiny mora. Mba hisorohana ny ho lasa niharam-pahavoazana, andramo ny fandinihana ilay tranonkala voalaza. Mety hamonjy anao vola izany.
Ny tranokala fanentanana hosoka - dia manaparitaka marika maneran-tany sy fialan-tsiny amin'ny tsy filaminanaIreo mpivarotra an-tserasera mitady hividy zavatra vaovao
Fikomiana vaovao hosoka - fanehoana tena.